श्रीजल लामा| Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
सरकारलाई यो जानकारी होस कि कतारमा नेपालीको बेसिक तलब ३०० रियाल छ भनेर । कतार आफु विश्वमा धनि राष्ट्र अनि विश्वकपको तयारी गर्दैछ तर लाखौं कामदारको अवस्थाका बारेमा कतारको सरकारले सोचेको छैन । कामदारले काम अनुसारको तलब पाएका छैनन् ।
दिनभर लाइनमा बसेर कर तिरेर आएँ । अनलाइनबाट सबै खालका कर तिर्ने एप बनाए पो हामीलाई काम लाग्थ्यो । आफ्ना डकुमेन्ट हेर्नको लागि मात्रै नागरिक एप बनाएर कुन चाहिँ युगमा फड्को मारेको हो ? हाम्रा डकुमेन्ट त हामीले ...
विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मताधिकारको लागि तयारी थाल्न अदालतले नै निर्देशन दिएको थियो । यो विषयमा निर्वाचन आयोगले के तयारी गरिरहेको होला ? विदेशमा रहेका लाखौँ नेपालीलाई पनि मताधिकारको व्यवस्था मिलाइयोस् ।
जुम्लाकाे गोठीगाउँमा आगलागीबाट २५ घर जलेर नष्ट, दुई दर्जन चौ...
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले कतारमा हुने बाइल्याट्रल टी–२० स...
भारतमा किसानको 'ट्र्याक्टर परेड' : दिल्ली हिंसापछि हरियाणमा ‘...
माघ १३, २०७७ मंगलबार
महाेत्तरी : दिवा खाजाबापतको रकम प्रधानाध्यापकले व्यक्तिगत रूपम...
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सर्वाेच्चमा अवहेलना मुद्दा दर्ता
प्रतिनिधि सभा विघटनकाे विराेधमा कांग्रेसद्वारा आन्दाेलन घाेषणा
केपी ओलीमा कम्युनिस्ट पार्टीकाे चरित्र देखिएन : माधव नेपाल
रामेछापकाे स्थानापति माविको कागजात प्रशासनको नियन्त्रणमा
महिला लिग : एपीएफले आर्मीलाई २–० ले हरायो
बाँके र कपिलवस्तुमा २५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा परियोजना बनाउन...
नेपालमा काेराेना सङ्क्रमण हुने २ लाख ७० हजार नाघे
हुस्सुका कारण काठमाण्डौ–विराटनगर रुटका ११ वटा उडान स्थगित
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध अझै शक्तिका साथ लड्छाैँ : प्रचण्ड
तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै बन्यो नेपालको दोस्रो लामो पक्की पुल, प्रधानमन्त्रीद्वारा उद्घाटन
‘दैवले दिएको चोट त सहेकै थिएँ, लोग्नेको चोट कसरी सहनु !’
म असफल भएर केही हुँदैन, देश असफल हुनु हुँदैन : प्रधानमन्त्री ओली